Creative Writing » သီးသန့်​ အားသွင်းဖို့ မလိုတဲ့ ဘက္ထရီ	7
လို့​ခေါ်မလား ? ထပ်​ပြန်​တစ်​လဲလဲ အားပြန်​သွင်းလို့ရတဲ့ ဓာတ်​ခဲ​ခြောက်​​တွေရယ်​ ။ ​နောက်​ တစ်​ခါသုံး ဓာတ်​ခဲ​တွေရယ်​ ။ သို​လှောင်​နိုင်​စွမ်းတစ်​ခုခု ရှိပြီး အားကုန်​ရင်​ ပြန်​သွင်းရတာမျိုးပဲ ။ အဲ့ ငယ်​ငယ်​က အားအိုး လို့​ခေါ်တဲ့ ဘက္ထရီ အိုး​တွေ သုံးတယ်​ ။ အက်​ဆစ်​မလုံ​တော့ သူနဲ့ ထိမိတဲ့ အ၀တ်​​တွေဆိုအ​ကောင်းမကျန်​ဘူး ။ တစ်​ည ဒါမှမဟုတ်​ နှစ်​ည​လောက်​ သုံးပြီးရင်​ အားပြန်​သွင်းရ​ရော ။ ခုချိန်​မှာလဲ ဖုန်း ဘက္ထရီ​တွေ တစ်​ချို့လည်း အသုံးမခံ တစ်​ချို့လည်း အသုံးခံ ဒါ​ပေမဲ့ အားကုန်​ရင်​ အားသွင်း​နေကြရ​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ကားဘက္ထရီ တို့ ဆိုင်​ကယ်​ ဘက္ထရီ တို့ကျ​တော့ သီးသန့်​ကြီး အားသွင်းစရာ မလိုပြန်​ဘူး ။ ​မောင်းနှင်​​နေရင်းနဲ့ သူ့ဖာသာသူ အားပြန်​ပြည့်​သွားသတဲ့ ။ သုံးတဲ့​နေရာကွားသွားလို့​ပေါ့ ။ ကား​တွေ ဆ်ိုင်​ကယ်​​တွေမှာ တပ်​ထားတဲ့ ဘက္ထရီ​တွေ ဖြုတ်​ဖြုတ်​ပြီး အားပြန်​သွင်း​နေရရင်​လည်းခက်​သား ။ လူ​တွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ ။ လှုပ်​ရှားလို့ ကုန်​ခန်းသွားတဲ့ စွမ်းအင်​​တွေ အတွက်​ အားပြန်​ဖြည့်​​ပေးရသလိုမျိုး ။ အသိပညာ အတတ်​ပညာမှာလည်း ထပ်​ခါတစ်​ လဲလဲ ဖြည့်​​ပေး​နေရတာပဲ​လေ ။ သင်​တန်း​တွေ အထပ်​ထပ်​တက်​ ။ စာအုပ်​​တွေက ​လေ့လာမှတ်​သား ။ ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​လည်း ပြန်​​ကြော်​ငြာ ရတာကတစ်​မျိုး ။ ဘက္ထရီ အားဖြည့်​ သလိုမျိုး​လေ ။ တစ်​ချို့ကျ​တော့လည်း သီးသန့်​ အားဖြည့်​​ပေးစရာ လိုမယ်​ထင်​​ပေမဲ့ သူ့ဖာသာ အားပြည့်​ပြီးသား​တွေလည်းရှိတတ်​တယ်​ ။ စာ​ပေ​လောကမှာ စာ​ရေးဆရာ အသစ်​တစ်​​ယောက်​က စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ထုတ်​​တော့မယ်​ဆိုရင်​ ရှိပြီးသား က​လောင်​​ဟောင်း​တွေက ​စော​စောက ဘက္ထရီ အားဖြည့်​​ပေးသလိုမျိုး ​ဘေးက​နေ ၀ိုင်းဝန်းပြီး အမှာစာ​ရေး​ပေးကြ ​ဝေဖန်​ချက်​​ရေး​ပေးကြ စာဖတ်​သူသိ​အောင်​လုပ်​​ပေးကြတယ်​ ။ ဘယ်​​လောက်​ပဲ ​ဘေးက​နေပံ့ပိုး​ပေး​ပေး သူ့မှာ အလိုလို အားပြန်​မပြည့်​နိုင်​ရင်​ တစ်​အုပ်​နှစ်​အုပ်​​လောက်​နဲ့ ရပ်​သွားတာပဲ ။ ​ ကျုပ်​တို့ ရွာထဲက ဆရာမ ၀င့်​ပြုံးမြင့်​က​တော့ အဲ့ဒိလိုမဟုတ်​ဘူး မနက်​က အလင်းဆက်​က ပို့​ပေးလို့ Thomas Mann ရဲ့ Buddenbrooks ကို ဘာသာပြန်​ထားတဲ့ စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ ​ရောက်​လာတယ်​ ။ ကားဂိတ်​က​နေယူလာပြီး မျက်​​စောင်းထိုးက ထိုင်​​နေကြ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​မှာ ဖွင့်​ကြည့်​​တော့ စာအုပ်​က 2006 တုန်းက ပထမအကြိမ်​ ထုတ်​ပြီးသားကို အခု 2015 မှာ ဒုတိယအကြိမ်​ ပြန်​ထုတ်​တာဗျ ။ ​နောက်​စာအုပ်​ကို ဆက်​လှန်​ကြည့်​​တော့မှ အားပါးပါး အမှာစာ​တွေ ​ရေးတဲ့သူ​တွေက
Alinn Z says: စာရေးသူကို ဘက်ထရီလေးနဲ့ တင်စားလိုက်တာလေး…သဘောကျမိ… …….
ဆိုတော့….လဲဖတ်ကြစို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အင်း စာအုပ်​ချင်းလဲချင်​ရင်​ လူကိုယ်​တိုင်​လာလဲ လှဲ့​လေ ။ အဲ့စာအုပ်​ကြီး ဖတ်​ပြီးရင်​ ဘယ်​စာကြည့်​တိုက်​ပို့ရမလဲ စဉ်းစား​နေတာ ။ အနီး အနားမှာ active ဖြစ်​​နေတဲ့ စာကြည့်​တိုက်​က နှစ်​ခုဖြစ်​​နေတယ်​ ။ ကိုယ်​တိုင်​လဲဝယ်​မလှူနိုင်​​သေး ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟာ ညွှန်းလိုက်တာ အဘနီကလည်း။ အဲဒီလောက် မဟုတ်ဘူး။ ကျမအထင် လူတစ်ယောက်မှာ ဦးနှောက် အလုပ်အရမ်းလုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ ၃၀ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်က အတွေးအရေးကို အခုအရွယ်မှာ ပြန်မရဘူး။ ဘယ်လိုမှ ပြန်လုပ်ယူလို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ အားသွင်းဖို့ လိုတာပေါ့။ ကျမ အခု နောက်ပိုင်းရေးနေတဲ့ စာအုပ်တွေက ဟိုအရင်ရေးခဲ့တာကို မမီဘူး။ ပြီးတော့ အတတ်ပညာကို ပိုပြီးအားကိုးမိတယ်။ အဲဒါလည်း မှားတာပဲ။ အတတ်ပညာပိုင်းလျော့ပြီး အနုပညာပိုင်းကောင်းမှ လစ်ဟာချက် ဒါမှမဟုတ် အမှားအယွင်း ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် အဲဒီ flaw က အနုပညာဆန်သွားတာ။ အတတ်ကျူးပြီး အရေးအသား ပြည့်စုံလွန်းနေရင်လည်း ဖတ်မကောင်းဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: ယူအက်စ် အခြေခံဥပဒေကျမ်းဂျီးကို ဘာသာပျံမလို့ အနော် စဉ်းစားနေဒါ… ဆယ်နှစ်ရှိပီ..။
Mike says: .စာအုပ်ကိုခုထိမယူဖြစ်သေး
အောင် မိုးသူ says: လကုန်မှပဲ ဝယ်ဖတ်ဖြစ်တော့မယ်။
manawphyulay says: ပထမအကြိမ်ကတော့ ပုဂံစာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေတာ ဖြစ်ပြီး အခုဒုတိယအကြိမ်ကတော့ စိတ်ကူးချိုချိုက ပြန်ထုတ်တာလား အဘနီ… ဖတ်ချင်သူများ ပထမအကြိမ်စာအုပ်ကို ဖတ်ချင်သူများ မနောဆီမှာ ငှားလို့ရပါတယ်လို့ မနောလည်း လက်ဆောင်ရထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။